यस्तो छ धतूरोको तान्त्रीक प्रयोग, जानी राखौ - साइन्स इन्फोटेक
जुलाई 12, 2019 जुलाई 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, तान्त्रीक, धतूरो
ताँन्त्रीक विधिबाट धतूरोको जरा घरभित्र राख्नाले सर्प नपस्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गहन अध्ययनको खाँचो देखिन्छ । आयुर्वेदिक औषधिको रहस्य जान्न सके मानिसले चमत्कारयुक्त काम गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लागेको छ । आज मैले यिनै विषयमा केही प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु । सर्पलाई हजुरले देख्नुभयो तर डरले गर्दा छोप्न सक्नु हुन्न तर गरूड बृक्षको बोक्रा वा नागदमन बुटिलाई हातमा लिएर छोप्न सक्नुहुन्छ । यसको ठोस कारण हो जडिबुटीको महिमा अपरम्पार छ यसको व्याख्या गरेर साध्य छैन ।
जडिबुटीको महत्व हामीले भन्दा पशुपन्छीले ज्यादा बुझेको हुन्छ । एकपटक मेरो घरमा एउटा कुकुर पालेको थिए उसलाई पेट सम्बन्धी समस्या भएको रहेछ । एकदिन उ अघि म पछि गर्दै हामी चौरतिर लागेका थियौं कुकुरले दुबो खाएको देखे तर मलाई यसको कारण केहि थाहा थिएन एकछिन पछि उसले वाक्न थालेपछि मात्र थाहा पाए दुबोले उल्टि गराउदो रहेछ ।
पशुलाई बोलाउदा आउछ जा भन्दा जान्छ । यदि पशुले यो नबुझ्ने भएको भए कुरै अर्को हुने थियो हामीले पशुको भाषा बुझ्न नसकेको मात्रै हो जुन कुरा पशुले सवै बुझेको हुन्छ । न्याउरी मुसालाई सर्पले डसेर मर्दैन तर उसले आफ्नो बचाउको लागि पटक-पटक जडिबुटी सेवन गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो समाजमा यस्ता कुरामा कतिपयको ध्यान पुग्न सकेको छैन यो विडम्बना हो । आज जतिपनि औषधि हामीले सेवन गरेका छौं सवै विदेशीको देन हो भन्दा फरक छैन । हामी परनिर्भरमा चुर्लुम्म डुबेका छौं के राम्रो के नराम्रो केहि थाहा छैन । अन्तमा सर्प घरमा नपस्ने तान्त्रीक विधि मैले तल दिन गइरहेको छु ।
धतूरालाई कसरी प्रयोग गर्ने ?
धतूराको जरालाई अश्लेषा नक्षत्रमा उखेलेर घरमा ल्याउने र घरमा राख्ने सर्प कहिलै भित्र पस्दैन यो अनुभव स्वयं मैले गरेको छु ।
नोट: अश्लेषा नक्षत्रबारे ज्योतिषलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।
← अधिकांश महिलालाई हुने रोग ल्यूकोरिया र यसको उपचार
मानव स्वास्थ्यमा बहुउपयोगी बोजोको प्रयोग →
नङमा हुने फंगस रोगको सफल उपचार
सेप्टेम्बर 8, 2019 सेप्टेम्बर 8, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
मे 4, 2019 मे 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
4 thoughts on “धतूरोको तान्त्रीक प्रयोग”
Pingback:कालो हलेदोको सफलाताको तान्त्रीक रहस्य, जानी राखौ - डा. राम बहादुर बोहरा
Pingback:यस्तो छ जडिबुटीद्वारा हिप्नोटाइज्ड गर्ने तरिका, जानी राखौ
Pingback:यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ धतुरालाई औषधिको रुपमा, जानी राख्नुहोस्